Ny fanaraha-maso Bluetooth roa ihany no azonao ampiasaina amin'ny fotoana mitovy amin'ny Apple TV 4 | Avy amin'ny mac aho
Miaraka amin'ny taranaka fahefatra an'ny Apple TV, manandrana mamadika ny ilay orinasa monina any Cupertino Apple TV 4 ao amin'ny fitaovana filokana ho an'ny efitrano fandraisam-bahininao. Na izany aza, araka ny hitantsika, ny fahitan'i Apple ny lalao multiplayer amin'ny Apple TV 4 dia tena voafetra.
Raha ny filazan'ny mpamorona sasany izay efa nahazo ny Kit Kit ny Apple TV 4 dia tsy manohana afa-tsy ny fitaovana mpanara-maso roa mifandray amin'ny Bluetooth amin'ny fotoana iray. Izany dia ankoatry ny fampiasana Siri izay ampiarahina amin'ilay fitaovana ary azo ampiasaina ho fitaovana filokana ihany koa.
Ity dia somary manjavozavo. Vao nahazo ny iray amin'ireo kitapom-pirinty izahay izay tsara vintana ny nandresy tamin'ny Apple. Nosamborina haingana izahay hividy mpanelanelana taonina amin'ny fanantenana hanao lalao filalaovana mpilalao 8.
Nihena haingana ireo fanantenana ireo rehefa tsapan'izy ireo fa hifandray fotsiny ilay Apple TV vaovao fitaovana Bluetooth ivelany roa miaraka, miaraka amin'ny remote mifandray. Midika io fetra io fa ny farafaharatsiny mpilalao telo afaka mandray anjara amin'ny lalao multiplayer amin'ny Apple TV 4 izy ireo amin'ny fotoana rehetra.
Io famerana io dia mihatra amin'ny mpamily iPhone (MFI) fotsiny fa tsy amin'ny iPhone ihany. Midika izany fa ny mpandraharaha dia afaka manampy fanohanana ny lalao ho an'ny Apple TV, hampiasa ilay iPhone ho fitaovana filalaovana, saingy izany dia mitaky ezaka bebe kokoa amin'ny fampandrosoana azy ireo.
Apple dia mety afaka manala io fameperana io amin'ny Apple TV 4 amin'ny alàlan'ny a fanavaozana ny ho avyFa na hiafara manao zavatra toa izao ianao na tsia dia zavatra iray ihany no hilazana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Ny mpanara-maso MFi Bluetooth roa ihany no azonao ampiasaina amin'ny fotoana mitovy amin'ny Apple TV 4